Iimfihlelo zeCiFin cuisine
Ilizwe ngalinye linempawu zalo, kubandakanywa nokutya. Awuzange umangaliswe ukuba amaTaliyane adla i-spaghetti, i-French-different sauces, kwaye ezi mveliso ziphezulu kakhulu ngeekhalori. Kodwa kutheni bahlala behle? Kulo mzekelo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abahlali bamazwe amaninzi badla okumnandi kwaye abanalo iingxaki ngobunzima obuninzi, kuquka i-Finns. Ngoko yintoni imfihlo?
Ngokukhawuleza ekufikeni kwiikhilo esenyakatho, ukulahlekelwa isisindo ngokukhawuleza kwinqabileyo emehlweni. Emva koko, unamatholeji amaninzi! Kodwa nangona kunjalo, eFinland baphumelele ukuwagxotha, kwaye bangaziphoqeleli ekudleni, kwaye bahenyuza ngendlela ehamba phambili yokuphila. Mhlawumbi sifanele siboleke kubo into ethile?
Ibhayisekile kunye nekhofi
Kuqala phi ukusa kwaseFinnish kusasa? Ngendebe yekhofi ecocekileyo ... kunye ne-saunas. Kuli lizwe, ikhofi inxila kakhulu kwaye ikhona ngaphezu kwayo nayiphi na enye. I-sauna yinto endala endala, enceda ukuhlala kwindawo efanelekileyo. Phantse zonke izindlu zinezindlu zaso. Kwanamaphiko kukho i-sauna kawonkewonke (enye kwiplanga). Kwiingcango kukho iishedyuli zokutyelela, nganye intsapho inexesha layo. Ngoko ke, ngaphezu komfanekiso omhle ufinnov naye unesikhumba se-velvet.
Isidlo sakusasa se-Finns asinayo nayiphi na into ekhethekileyo. Kuyafana nakwezinye naziphi ilizwe: iiflegi okanye i-muesli eneghuthi, ubisi okanye ihlume. Ngendlela, le yogurt ithandwa kakhulu eFinland kwaye inokwakheka okuthe ngqo. Kwaye abo bafuna ukugcina ixesha, bangadli nto ekuseni. Isidlo sakusasa sithatyathwa yendebe yekhofi. Yaye ngelixa ikofi ikulungele, umntu uyilungiselela i-snack yomsebenzi: isandwich eneeqabunga zeklabishi, izaqathe okanye imifino. Ngokukhawuleza xa ixesha lokukhulula lifumaneka emsebenzini, le sandwich iya kudliwa.
Ngendlela, iFomns ayithandi ukuqhuba iimoto. Baye bahamba ngeebhasiki. Ukusuka kubo kunye neenzuzo ezininzi ngaphantsi zisetyenziselwa uhambo. Ukongeza, isixeko sixhotyiselwe ukuhamba ngebhayisiki, nokuba kukho iindawo zokupaka kule moto. Ebusika, basasa khona.
Ukutya amaFomns asetyenziswa ekudleni kwiivenkile neevenkile. Izidlo ezikhethiweyo ezizodwa zilungiselelwe apho, kunye nezikhetho ezahlukeneyo zokunyusela. Nantoni na isilimu yekhrimu ephuma kwimifuno, isaladi, isahlulo se-salmon. Ngaphambi kokutya, i-carafe ngamanzi ahlambulukileyo kunye nesonka esitsha sisoloko sikhonza. Ngendlela, i-Finns isoloko isela iglasi yamanzi acocekileyo ngaphambi kokuqala kwesidlo. Oku kuyilungelelaniso oluchanekileyo lwezinto.
Ngoku nje eFinland kuye kwathandwa ukuchitha ikhefu lesidlo sasemini kwi-spa. AmaFom axhalabele kakhulu ngempilo yabo, ngoko aphuthelwa ithuba lokutyelela igumbi lokuxilisa okanye inkqubo ye salon. Ukuba zihlalo zentambo, amantombazana atywala itiye eluhlaza aze adle izityalo ezomileyo ezicocekileyo okanye izityalo ezomileyo. Ewe, kunye namadoda angagqithanga emva koko anikezele kwaye angaphuthelwa ithuba lokuzisa umzimba wabo ngendlela.
Kwi-tundra, kwindlela yesitrat
Ngomso, njengoko uqonda, i-Finns ayidli kakhulu. Kodwa kufutshane nesidumbu sangokuhlwa sidinga kwaye siyifumana ngokupheleleyo. Sekunjalo abakhathaleli ngabo kwaye badla ukuzaliswa kwabo. Yaye isidlo sihlala ixesha elide, yonke into ihlolwe kwaye akukho mntu ukhawuleza. Ukutya kwesiFinnish kuninzi kwaye kuyinandi. Okokuqala, indlebe kwi-salmon. Ngokubanzi, kwi-cooking yaseFinnish kukho izitya ezininzi ngeentlanzi. Emva kwesobho - i-roast venison, kunye namazambane ezicocekileyo kunye nama-cranberries aneenzululwazi. Ekugqibeleni, ushizi ofudumele olufudumeleyo, owenziwe ngobisi lweengulube kunye nekhilimu omuncu kunye ne-ice cream nge-resin. Nazi izilingo ezingavamile ekudleni!
Ngokubanzi iLaplanders yazi kakhulu ngokutya. Ukuba e-Helsinki behla kwii-calorie, ngoko kusondele kumntla injalo inombolo ayiyi kudlula. Musa ukuvumela ubomi. Kufuneka uhambise uninzi ukufumana ukutya kunye nokunye, ngoko ufuna iikhalori ezininzi. Kwaye zonke ezi iikholori zifumaneka kwi-sausage mackerel, i-stewed partridge kunye ne-cranberries, ii-pie kunye nokuzaliswa okuhlukahlukeneyo, ii-pie, i-salmon, izitya ezenziwe kwi-venison okanye iibhebhe, i-mousses njalonjalo.
Nangona kuqala ukujonga i-Laplandian yendabuko ibonakala inzima, eqinisweni yonke into iyanelisayo kwaye ihambelana. Kancinci yonke imveliso ayinambisi apha, kodwa ibhaka, iphekwe okanye ibhaka. Intlanzi - imveliso rhoqo. Ewe, kunye nepargri kwi-grains epheleleyo, bayazikhangela. Inyama yezilwanyana, iibhere zebhere zihanjiswa nge-cranberries, ama-cloudberries okanye i-cranberries. Isonka se-Av sinyuka iireki okanye iinqununu ze-rutabaga.
Kwaye i-dessert, ichibi lokubhukuda!
Naphezu kwendlela yabo yobomi kunye nokutya okunempilo, i-Finns ibanjwe zizifo ze-cardiovascular and retratirement early. I-Avse ngenxa yobuninzi be-cholesterol egazini kunye nokungabikho komsebenzi. Ngenxa yoko, abaqeshi banquma ukulungisa ingxaki ngokukhawuleza le ngxaki kwaye bafika ngendlela entsha yokuzonwabisa-ukufikelela kumaziko okuzonwabisa. Isampula se-centralizedfilinsky yokuzonwabisa - ipaki yamanzi, i-simulators kunye nedama lokubhukuda. Ngethuba elifanayo, uya kuqala unikezwe inkulumo malunga nokutya okunempilo, malunga nombutho wezinto zokuzilibazisa, kwaye emva koko uza kuguqula iipedals kwi simulator okanye ugibele kwi-echibini.
Ngokuhamba kwexesha, oku kuqhelekile kwimikhwa yokuba abantu bebudala babo bazama ukunamathela kule ndlela yokuphila. Yingakho unokuhlangana nabantu abathatha umhlala-phantsi esikhwameni sobusuku busika ... Bakudinga ukuthatha umzekelo kubo, kuphela iiskiti kufuneka zitshintshwe ngenye into, umzekelo, ibhayisekile.
Ukupheka kwezitya ezidumile
Njengoko uqonda, i-Finns ijwayele ukutya ngokutya kunye nempilo enempilo. Ngoko makhe sibone umzekelo kubo kwaye uzame ukupheka isibini sokukhanya, kodwa izitya zokunisela umlomo ezisuka kwiCuisine yaseFinnish.
Ukulungiselela kwalo uya kuyidinga: isiqingatha se kilogram yezidibaniso, ilitha yamanzi, isiqingatha ilitha yobisi, ilitha yamanzi, enye i-anyanisi, ii-litate ezine, imifino, ityuwa, i-pepper kunye ne-spoonful of flour.
Sika iintlanzi zibe yizicucu, iitapile zibe yi-cubes, cima i-anyanisi, yongeza ityuwa kunye nepepper uze uyipheke ngomlilo ocothayo malunga nemizuzu elishumi elinesihlanu. Emva koko udibanise ubisi nomgubo uze uthule epanini. Pheka enye ngomzuzu. Khonza isobho ngemifuno.
I-Salmon ngeeshizi kunye nemifuno
Ukulungiselela i-salmon uya kuyimfuneko: i-salmon fillet - 1 kg, ushizi ocoliweyo, umsila womhlaba, ijusi lemon, i-thyme, i-dill kunye ne-e-onions.
Yenza incision ejulile kunye nobude befayile. Iingqungquthela ezizaliswe zizaliswe ngetekisi kwaye zifefeze izityalo. Ukudibanisa ukukhangela, sebenzisa iintonga zokhuni. I-pepper yentlanzi, ityuwa kwaye uthele i-juice yelisi. Bhaka kwi-oven imizuzu engama-20 kwiqondo lokushisa kwama-degrees ama-200.
U Karelian uhamba
Ukulungiselela i-Karelian i-pie uyadinga izi zithako ezilandelayo: 250 amagremu we-flour flour, i-100 ml yamanzi, i-1.5 tablespoons zetyuwa, i-200 gram yeerayisi e-viscous okanye i-porridge yengxowa yokuzaliswa.
Lungiselela inhlama ephuma kumgubo, amanzi kunye netyuwa. Yahlula kwiinqununu ezingamashumi amabini ezifanayo. Isiqendu ngasinye siphume ukuze ube neqhekeza elincinci. Ephakathi kwekhekhe nganye, faka ukuzaliswa, kwaye ujikeleze inhlama, khusela intlama. Iipatties kufuneka zifakwe kwi-ovini imizuzu elishumi elinesihlanu, kufuneka i-baking tray ikhutshwe kwaye i-greed pies neqanda elibethiwe. Emva koko, faka i-patties ehovini kwakhona uze ubhaka uze uphekwe. Ngaphambi kokuba usebenze, ufafaza nganye ipayi ngeeqanda eziqhotyosweyo okanye ezigayiweyo.
Ezi zitya ezintathu ziya kuhlala zifanelekileyo kwitafile yakho. Zilungele ngokukhawuleza kwaye zihle kumnandi. Kwaye kubaluleke kakhulu - luncedo.
Iyiphi indima insimbi edlala kuyo emzimbeni womntu?
I-Grapefruit: inobungozi okanye iyanceda?
I-Fructose: inzuzo kunye nenzakalo
Indlela yokubophelela ngokukhawuleza inqabunga ngo-2018: landela imithetho emithathu ebalulekileyo!
I-yoga yomntwana ukususela ekuzalweni ukuya kwiiveki ezisibhozo: indlela yokubamba kwaye uthwale umntwana
Ukuphulukiswa kunye neempawu zobugqi
Iipancakes nge-cherry sauce
Tetrazini nge turkey
Botox: yintoni na kwaye akunakwenziwa emva kwenkqubo
Abazali namakhono ekuphuhliseni abantwana
Iingxaki eziqhubekayo kwindawo yokusebenzela
I-Italian cuisine, izitya ezidumileyo
Ukunyanga kwabantu kwi-celandine yomhlaza